Hazo fibaikoana: Asehoy ny lahatahiry toy ny hazo amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Indraindray ny fitetezana ireo lahatahiry Linux avy amin'ny console dia somary sarotra, ankoatr'izay, amin'ny tranga sasany dia mila fantarintsika ny firafitry ny reperitoara sasany, ny fomba voajanahary hanatsarana izany dia amin'ny fampisehoana ireo lahatahiry amin'ny endrika hazo.
Ny fanehoana lahatahiry ho toy ny hazo ao amin'ny Linux dia tsotra ihany, noho ny fampiasana azy hazo, izay tsy apetraka amin'ny alàlan'ny tsindry ao amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux fa hita ao amin'ireo tahiry ofisialy.
lahatahiry miendrika hazo
1 Inona no baikon'ny hazo?
2 Mametraka ny baiko hazo amin'ny Linux
3 Ahoana ny fampiasana ny baiko hazo
Inona no baikon'ny hazo?
Izy io dia baiko iray ampiasain'ny mpampiasa Linux, izay ahafahantsika mampiseho ny ambaratongan'ny lahatahiry ny rafi-pandehanay amin'ny endrika sary sy firafitra.
Ny baiko hazo dia mamela anao hanao lisitra ny lahatahiry amin'ny fitaovana ivelany.
Mametraka ny baiko hazo amin'ny Linux
Amin'ny distros sasany, ny baiko hazo dia apetraka amin'ny toerana misy anao, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy izany no izy, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ampy ny mametraka azy io amin'ny alàlan'ny repositories an'ny distro tsirairay.
Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto hametrahana azy amin'ny distro tianao indrindra.
$mametaka hazo ianao -y #Centos y Fedora
Azonao atao ny miantoka fa vita tsara ny fametrahana amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny baikon'ny hazo
Ahoana ny fampiasana ny baiko hazo
Ny fomba tsara indrindra hianarana ny tombony rehetra atolotry ny baikon'ny hazo dia ny fampiasana ny antontan-taratasin'ny baiko manokana, hanaovana io hazakazaka io avy eo amin'ny terminal. $ man tree
Toy izany koa, eto ambany aho manome anao lisitra, miaraka amin'ireo safidy fampiasa indrindra manodidina ity baiko ity:
Misy fitambarana maro hafa amin'ny baiko izay mety ho tena ilaina tokoa rehefa mampiseho lahatahiry toy ny hazo ao amin'ny Linux.
Tsarovy fa ny masontsivana an'ity baiko ity dia azo atambatra, ahatongavana ohatra «asehoy ny lisitry ny fisie rehetra, ao anatin'izany ny miafina miaraka amin'ny lalany avy«, Noho izany dia ampiharinay tree -af
Ka manantena izahay fa afaka mahazo tombony betsaka amin'ity baiko tsotra nefa mahasoa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Hazo fibaikoana: Asehoy ny lahatahiry toy ny hazo amin'ny Linux
Lahatsoratra tena tsara sy fohy, Lizard!. Isaky ny nilaza tamiko ry zalahy fa misy rindranasa Windows izay nanao zavatra mitovy amin'izany, dia hampianariko azy ireo ny baikon'ny hazo. Vitsy amin'izy ireo no mahalala ny baikon'ny baiko MS-DOS sy safidy hafa.
Fantatro tamin'ny alàlan'ny fikandrana sy ny fahamarinana io baiko io, toa hafahafa tamiko ny tsy ananan'ny linux azy io amin'ny alàlan'ny toerana misy azy fa tena ahazoana aina tokoa raha vao apetraka.
Taty aguilar dia hoy izy:
Tsara be !!, namonjy ahy ianao, andro maro no nikarohako hatramin'ny farany, misaotra anao !!!!!
Valiny tamin'i Taty Aguilar
Pachu dia hoy izy:
Mamiratra !! Nety tsara izany, misaotra betsaka tamin'ny fanampiana.
Valiny tamin'i Pachu